အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: July 2008
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:19 AM0comments Links to this post
ဘယ်တော့မှ မညှိုးတဲ့ အာဇာနည်မျိုး
မသမာသူ မတရား မြှုံးသွင်း
အနိုမ့် ဘက် တဟုန်ချင်း
ပြိုနိုမ့် ဆင်းတဲ့ ရွှေပြည်ဗမာ။
မြန်မာပြည် ကို မြန်မာတွေ အုပ်စိုးကာမှ
မြန်မာတွေ အရိုး ပိုပ်ို ကျ..
ဌက်လင်းဠ ကျနေတဲ့ မြေ။
မင်းတို့ ဘယ်လောက် စားနိူင်မလဲ..
မင်းတို့ဘယ်လောက် ကြွားနိုင်မလဲ
အားလုံးလဲ လဲ...မင်းတို့ လည်း လဲမှာဘဲ.
အမျိုးဖျက် ဗမာ..နံမည် တင်ရှားစွာ
မင်းတို့ အလောင်း စိန်စီတောင်..
ရှက်စရာ မင်းရဲ့ ဆွေ ခုနှစ်ဆက်..
မျိုးချစ်စိတ်တွေ ကို မကုန်မချင်း
မင်းတို့ဗြင်းနေတာ.
မသဒ္ဓါ ( ၇။ ၁၉။ ၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:13 AM0comments Links to this post
ကျမ အဖေက ပြောဖူးတယ်
ကျမနဲ့ အချစ်။ ရင်ခုန်သံနှင့် ပျော်မြူး
မိုးမမြင် လေမမြင် ကြင်စဦး။
သမီး တစ်ကောင် က (၄)နှစ်.
ခမ်း လာခဲ့တဲ့ အချစ်.
အနံ့့ပြယ် သစ္စာ.
ချိုအချစ် တွေ ခါးတဲ့ အခါ။
ခုများကျ အ်ိမ်ထောင်ကွဲ တခုလပ်။
ရထားတဲ့ သမိုင်းဘွဲ့ လက်မှတ်
မှန်ဘောင်ထည့် အမေ အိမ်ထရံပေါ်တပ်
သမီးကလေး ကျောင်းကောင်းထားဖို့ ဒေါ်လာ။
အဖေရယ် ဆူမှာလား ဟင်။
အမေရယ် ဆူမှာလား ဟင်။
စစ်အာဏာရှင် အုပ်စိုးတဲ့ မြန်မာမြေ။
ကျမလည်းဘဲ မိဘကောင်း မေတ္တာရှင်။
ကျမ ဘွဲ့ နဲ့မတန်တဲ့ အိမ်ဖေါ်။
အဖေရယ် ကျမကို နားလည်ပေးပါနော်။
အိမ်ဖော် ထမင်းချက် တံပျက်လှည်း
စင်္ကာပူက နေ့ ရက် တွေ။
ပညာတတ်ကျမ၊ အလုပ်က အိမ်ဖေါ်
ညည အိမ်ရှင် ယောက်ျား.
အိမ်သာနဲ့ကျမ အိပ်ခန်း မှား
ကျမ မအော်ဝံ့ ရှက်ရှက်
ကြာလာရင် ကျမ ဘဝပျက်မယ်။
စစ်အစိုးရက ဆက်ဆံရေး ကျိုးတိုးကြဲတဲ
မိန်းမသား ခိုင်မြဲတဲ့ အကျင့်သိက္ခာ
ကျမ အပျော်မယား မဟုတ်ဘူး၊
ကျမ ပြည်တန်ဆာ မဟုတ်ဘူး၊
သူ့ လက်ခုပ်ထဲကရေ..သူ့ အိမ်မှာနေ.
ကျမ. မြန်မာပြည်က မိန်းမသား.
နိူင်ငံတော် အခွန်ပေးစားတဲ့ လုပ်သား.
ကာကွယ်ရန် စေတနာ မပါဘူးလား။
နင် ဘာတွေ ချေးများနေလည်း၊
အိမ်ရှင်မ အစား အလုပ်လုပ်ရတဲ့အိမ်ဖေါ်
ပထမ နိူင်ငံသားက ဂုတ်သွေးစုတ်။
ကိုယ့် နိုင်ငံက မကောင်း
ပြည်သူကိုနှိပ်စက်။ ဒီလိုမှ အပြင်မထွက်လည်း
စားစရာမရှိ မွဲတေ။ ကျောမွဲ ခရုခွံကျွတ်သေ။
ကျမတို့ ရဲ့ ၈၈၈၈ မျိုးဆက်.
ဒီလိုနောင် ဘယ်နှစ်နှစ် ဆက်ဦးမလည်း
ကျမလို ဘယ်နှစ်ယောက် ဘ၀ပျောက်ဦးမလည်း
အဆုံးမရှိတဲ့ ဥမင်၊ လှိုင်းကြမ်းပေါ်ကလှေငယ်ရှင်
သော့ခတ်ထားတဲ့ အေးဂျင့်ရဲ့ အိမ်မှာ
၇ ပေ ရှည်..ခွေးလည်ပတ်လေးတစ်ကြိုး.
မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ကလေးက (၅) ထည်။
၅၀% ။ ၅၀% သော..ကြီးမား စွန့် စားချက်။
သမီးရယ် နားလည်။ အဖေရယ် နားလည်။
ကျမရဲ့ ကြေကွဲ ပုံပြင်။
မသဒ္ဓါ ( ၇။၁၆။၂၀၀၈)
ကြိုးစားမှုသည်သာ..မိန်းမကောင်းတို့ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာပါညီမငယ်။
တက်ကျိုးတာတော့..၀ဋ္ဋ်ကြွေး ဆိုရင် ပေးစရာရှိတာ ပေးလိုက်ပါ ညီမလေး။ ညီမလေး ကောင်းရာ သုဂတ်ိလားပါစေရန် မသဒ္ဓါမှ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:14 AM 1 comments Links to this post
မြက်မစားလိုသော ကေသရာဇာခြင်္သေ့။ ပညာတတ်များ ဗိုက်ဆာသော တစ်နေ့ 
ဇနပုဒ်က တဲကုပ်မှာ နေဖူးတယ်။
ပညာရှိ သော်လည်း အရောင်မှိန်။
ဘယ်လောက်တော်တဲ့ rocket scientist
လက်သမား က သူထက်သာ။
ဒီပညာ သုံးမရတဲ့ အခြေအနေ
ဒါဟာ ဒီလူ ညံ့တယ်လို့ ပြောမရပါဘူး။
(၁) အကပ် မရှိသောအခါ၊
(၂) အဖါး မတတ်သော အခါ၊
(၃) စစ်သား သားသမီးမဟုတ်
(၄) ကြီးကြီးပိုင်း သားသမီးမဟုတ်တဲ့အခါ၊
(၅) ကြံဖွတ် မ၀င်တဲ့အခါ၊
(၆) ဆေးခန်းဖွင့်ရန် မချမ်းသာသောအခါ၊
(၇) ယောက္ခမတွေ က အချလာဖြစ်နေသောအခါ၊
မိမိကိုယ်မိမိ. ယုံကြည်စိတ်ချမှူ မရှိတဲ့အခါ၊
(၉) အစိုးရ အလုပ်မရတဲ့အခါ။
( ၁၁) နိူင်ငံခြားသွားချင်တဲ့အခါ၊
(၁၂) နိူင်ငံခြားမှာ အမာခံ ဆွေမျိုး
(၁၃) နိုင်ငံခြားဒေါ်လာလိုချင်သော အခါ၊
(၁၄) နိူင်ငံခြား ထွက်ရန် စရိတ်မရှိ တဲ့အခါ၊
စိန်ခဲ ကျောက်ခဲ ပတ္တမြားခဲ..
တန်ဖိုး မသိတတ်ကြတာ သဘာဝ။
တန်ဖိုး မကြည့်တတ်တာ သဘာဝ။
လွယ်လွယ် အပြင်ထွက်ကြရဖို့ က
မိန်းခလေးဆို အိမ်ဖော် အလုပ်
ယောက်ျားဆို စက်ရုံ အလုပ်ကြမ်းလုပ်
အေးဂျင့် ခေါင်းပုံဖြတ်ခုတ်တာ အသိ.
အိမ်ဖော်အလုပ်နဲ့ နိူင်ငံခြား မထွက်ကြသော်လည်း။
Visa ကျော်..over stay
အခြေအနေ "ဝလုံး" လုပ်ကိုင်ခွင့် ဆုံးတဲ့အခါ။
အိမ်ရှင်နိုင်ငံက အသ်ိအမှတ် မပြုတဲ့အခါ။
Visa မရှိ၊ ကျောင်းတက်ခွင့်မရှိ.
Visa မရှိ၊ ခိုးနေကြရ၏။
တနေ့ ရှာမှ တနေ့ စားရ။
ဆေးလိုင်စင် အကြိမ်ကြိမ်ဖြေ တဖုန်းဖုန်းကျ
ဒီလိုဘ၀တွေ လက်တွေ့ မှာမရှိဘူး ထင်သလား။
လာကြည့်လှဲ့ ပါ့ ဂျပန်။
နွံ မှာနစ်နေတဲ့ ပတ္တမြား
အဖိုးတန်တဲ့ ပန်း အများအပြား..
နှမြောဖွယ်..ငါတို့ ရဲ့ ဦးဏှောက်တွေ။
ဒေါက်တာကိုစိုးထက်သည် ပညာတော်သင် တဦး ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပညာ၏တန်ဖိုးကို လူ၏တန်ဖိုးကို အလေး ထား ပါသည်။ မှန်ကန်ပါသည်။ ဆရာဝန် ဦးရေမြောက်မြားစွာ နှစ်စဉ် ကျောင်းဆင်းပါသည်။ အားလုံး ရေကန် အသင့်ကြာအသင့် ဖြစ်မလာပါ။ အားလုံး ကံမကောင်းကြပါ။ အားလုံး မိဘအခြေအနေ စီးပွါးရေးမကောင်း ကြပါ။
အဘယ်ကြောင့် ပညာတတ်များအိမ်ဖေါ်လုပ်ရပါသနည်း။ ကို ဖတ်ပါက နားလည်နိုင်မည် ထင်ပါတယ်.။ အမှန် တကယ်ရင်နင့်ဖွယ်ပါ။ မသဒ္ဓါ သည် ဆရာဝန်များကို စော်ကားခြင်း မဟုတ်ပါ။ အမိမြေ၏ နှမျောတသ ဖွယ် ရင် နင့်ဖွယ် Brain Drain ကို စာဖတ်သူများ နားလည်ရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်က ပြင်သစ် တော်လှန်ရေး တွင် ဆာ လောင်နေသူ ပြည်သူကြီးအား မိဖုရားမေရီ အန်းတော်နက် က တအံ့တသြဖြင့် "ဘာကြောင့် ဤသူတွေ ဆူပူ နေရသနည်း။ ပေါင်မုံ့ စားစရာမရှိ။ ကိတ်မုန့် စားနေပါလား" ဟု ပြောခဲ့သည်။ ငယ်စဉ် က အဘယ် ကြောင့် သူမ ဤသို့ ပြောခြင်းကို မသဒ္ဓါ နားမလည်ခဲ့ပါ။ ကြီးလာသောအခါမှ နားလည်လာသည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော်. သူမ သည် မငတ်ဖူး သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုစိုးထက် လည်း..ဆင်းရဲမှုကြောင့် မာနမတင်းနိူင်ဘဲ ရရာ လုပ်ရသူများအပေါ် စာနာ ပေးနိူင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
ပတ္တမြားမှန်လျှင် နွံ့ မနစ်သော်လည်း. အာဏာရှင်တို့ က စစ်ဖနောင့် သံခွါတတ် ခြေဖြင့်နင်း အတင်းနှစ်၍ ပတ္တမြားများ နွံ့ နစ် ခဲ့ရပါသည်။ ဤသည်မှာ စံနစ်ဆိုးကြောင့်ပါ။ နားလည်ပေးပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:36 AM2comments Links to this post
ချစ်သောဧရာဝတီ။ ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ဖိနပ်မဲ့ ခရီးသည်
အရှေ့ တောင် အာရှက ပတ္တမြားမြေ။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တွင်းက အဖိုး
ရှုံးနိမ့်တဲ့ မဟာမိတ်သုံ့ ပန်း
အဖိုး နေရတဲ့ တဲတန်း
ကွေးမြစ်တံတား ရဲ့ ငရဲစခန်း..
မဲမှောင် အလင်းမဲ့ အနာဂတ်တွေ
မြန်မာ မြေသို့ခင်းသောသွေးသည်.
အသဲနှလုံးနှင့် အမျှ ထပ်တူ.
ရေအပြည့် ရေဗူးလေး တစ်လုံး..
သယ်ဆောင်ရာ ပစ္စည်း (၅ ) မျိုး
ချက်စရာခွက်နဲ့မီးခြစ်တစ်လုံး
ကျနော်..မိုင် (၆ဝဝ) ကျော်ခရီးစတယ်
ခြေလျှင်လမ်း ကြမ်းတော့ ကြမ်းမယ်။
ခရီးဆုံး တစ်နေ့ ရောက်ရမယ်။
နှစ် ၂ဝ ပြည့် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်
လွှတ်တော် ရှေ့ ရောက်ရမယ်။
ဥဒေါင်းတွေ တွန်ကာကစေဖို့ 
လွတ်လပ်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်း ခရီးသည်
အညို အမဲစွဲ..နာကျင်ကိုက်ခဲ လည်း
မသဒ္ဓါ ( ၇။ ၁၄။၂၀၀၈)
မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဖိနပ်မပါ၊ လမ်းလျောက်သူ အင်္ဂလန်နိူင်ငံမှ ကျောင်းဆရာ Ewen Hardie အားတလေးတစားဂုဏ်ပြူပါသည်။ “ Barefoot for Burma” campaign ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။ http://barefeetforburma.blogspot.com/ တွင်ကြည့်ရန်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:55 AM 1 comments Links to this post
လျှပ်စီးမုန်တိုင်း မိုးမုန်တိုင်း တွေဘဲ ခ ခ။..
အပူအအေး. နွေးထွေး ခြောက်သွေ့ 
တံလျှပ်တကွေ့နှင်းတပွေ့ နဲ့ 
စထွက်ခဲ့ ကြတဲ့ မတ်လ( ၁) ၂၀၀၈
မိုင် ၃၀၀၀ ကျော်..ခရီးရှည်..
ချီတက်နေတဲ့ ၈၈ စစ်ကြောင်း..
မကြာခင် ပန်းတိုင် အရောက်။
မိုင် ၁၀၀ ကျော်ရဲ့ အကွာ။
ငြိမ်းချမ်း စာပို့ ဆက်သား.
ပေးရမဲ့ ပြည်သူရဲ့ အသံ
ကူညီ လက်သို့ တောင်းပန်စာ။
တရားဓမ္မ အရ ကူညီပေးပါ။
ခွပ်ဒေါင်းနီအလံ တောင်ပန်ဖြန့် နေတယ်။
ပန်းလမ်းခင်းလို့လက်ကမ်းကြို။
မသဒ္ဓါ ( ၈။၁၂.၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:16 AM0comments Links to this post
ပြည်သာရင်. က ပြမဲ့ဒေါင်း
ပြည်နာရင်.. ချ ကြမဲ့ဒေါင်း
ဒို့ တွေမှာလည်း နီရဲတဲ့ သွေး။
အသက်ဘဲ စွန့် လွတ်လိုက်ချင်
သစ္စာနဲ့ဒေါင်း..
အသက်စွန့် မဲ့ ဒေါင်း.
ဒူးထောက်အညံ့ခံ ပြီး မတောင်း၊
ခွပ်ပြီး တောင်းမဲ့ ဇာနည်ဒေါင်း၊
ဒို့ ဗမာ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ။
အတောင်တွေ ဘဲ စောင်းစောင်း..
တကောင်ချင်း မျိုးပြုတ်တော့မှာ သတိဆောင်..
မသဒ္ဓါ ( ၇။၉။၂၀၀၈)
ဒေါင်းများ၏ စည်းလုံး ညီညာရေး အတွက် ကဗျာရေးပေးပါရန်..အကိုကြီးကိုအောင်ဝေးမှ idea ပေးသောကြောင့် တတ်နိူင်သမျှ မသဒ္ဓါ ရေးသားကြည့်ပါသည်။ မကောင်းလျှင် ခွင့်လွတ်ပေးပါ အကိုကြီး.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:22 AM 1 comments Links to this post
ရွှေတွင်း ငွေတွင်း ပယင်း ဒုတ္တာ
ပုလဲ အရောင် မမှိန်ပါ ခဲ့ 
ပဲပြောင်း နှမ်းဝါ စပါး နဲ့ ဆန်ရေ..
ရေနံတွေ ချောင်းသို့ စီး..
ခလေးတွေ အစာမဲ့ ဗိုက်ဟောင်းလောင်း
လာဘ်လာဘစား၊ အခွန် အတုတ်များ၏။
ရေပေါ်ဆီ ပညာမဲ့ စစ်သား.
ကျွန်လို ဒူးထောက် ခစားရဖို့ ရှိ..
ဘာ လုပ်ကြမလဲ။ ဘယ် သွားကြမလဲ။
ရေငုံနှုတ်ပိတ်..အအ လိုနေရင် အသက်ရှိ
နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောရင်.. အသက်ထွက်ဖို့ ကြည့်
တနေ့ တနေ့ ပိုထင်ရှား..
ရွှေ တြိဂံ က မူးယစ်ဆေးဝါး.
၁၂ နှစ်သမီး ပြည့်တန်ဆာ..
Made in Burma..ဗမာပြည်လုပ်ပါ.။
IT ဘွဲ့ ရတဲ့ ပညာတတ်မိန်းမ
ဗမာက..တင်သွင်းလာတဲ့ အိမ်ဖော် အပျိုစင်နုနု..
မိန်းမ သိက္ခာ.ရွှေပေးမရ.
ရွှေဘဘ လက်ထက်မှ တိုင်းပြည်ပျက်..
ဗမာရဲ့ အနာဂတ်ကို တကယ်ဖျက်တာ.ဘယ်သူ
ဗမာရဲ့ မျိူးဆက်ကို တကယ်ဖျက်တာ.ဘယ်သူ
ဗမာရဲ့ ဂုတ်သွေးကို တကယ်စုတ်တာ.ဘယ်သူ
ဒို့ သမိုင်းလည်း ဒို့ ရေး.
မျိုးချစ်စိတ်ပြင်..နိူင်အောင် တိုက်ကြပါစို့ 
နွေးထွေးပန်းကလေးတွေ လန်းဆန်းရေးသို့ 
အနာဂတ်ရောင်နီ..ဗမာမြေဆီ လင်းလက်စေဖို့ 
မသဒ္ဓါ ( ၇။ ၈။၂၀၀၈) အမှန်တကယ်စေတနာ ထားသူ များကို တိုင်းပြည်က လိုအပ်နေပါသည်.
စဉ်းစားပါ... သင်သည် ရှက်တတ်ပါသလား.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:52 AM 1 comments Links to this post
၈၈၈၈ မျိူးဆက်၏ အညတြဒဏ္ဍာရီ
ကျောင်းကိုစွန့်အိမ်ကိုစွန်
မကြောက်မရွံ့ ။ နောက်မတွန့် တဲ့ခြေလှမ်း
နှစ် ၂ဝ ကျော်..ပျောက်ဆုံး..
နအဖ လက်ထဲက မြန်မာပြည်။
ပြန်တွေ့ ကြ ဖို့ လမ်းမမြင်ပြီ။
မသဒ္ဓါ ( ၇။၇။၂၀၀၈)
သားငယ်၏ ရင်တွင်းမီး မှတ်တမ်း..
ယိုင်နဲ့ နဲ့သူခြေလှမ်းတွေ.
သားကြီးမို့အဖ အရာ
ကျနော့ အသက် ၁၆ နှစ်။
ဒို့ အရေး အော်တဲ့ခေတ်.
ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရဖို့ 
သွေးနဲ့ချွေးအသက်
လွတ်လပ်ကြဖို့ကျနော်တို့ ငြမ်းဆင်
သွေးကြွေးဆပ်ခဲ့တဲ့ကျနော် ရဲရင့် ခွပ်ဒေါင်း
ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲ့ ရဲဘော်..
ဤကဲ့သို့အရွယ်နှင့်မမျှ..ကြမ်းတမ်းသောဘ၀တွင်.ကျောင်းသားရဲဘော်များအဖြစ် ဖြတ်သန်းလာကြရသော မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးများ။ လွမ်းဆွတ်ပူပန် ခဲ့ကြရသော မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ချစ်သူ ရည်းစားများ အားလုံးကိုစာနာစွာ ဂုဏ်ပြုပါသည်။
ခေတ်ဆိုးတစ်ခုတွင်..မွေးဖွားကြီးပျင်းလာရသော မျိုးဆက်တခုအနေဖြင့် ပေါက်တဲ့နဖူး. မထူး.။လှေခွက်ချည်းကျန် ကျန်..အလံမလှဲ.အသက်သွေးချွေး.စတေး ကာ နောင်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်.တော်လှန်ရေးကိုအပြီးတိုင် ဆင်နွဲကြပါစို့ ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:17 AM 1 comments Links to this post
အဖေ တို့ ခေတ်
ပျဉ်ထောင် နဲ့ သွပ်မိုးအိမ်
ခလေး ၅ယောက် ကို ကျွေးမွေး.
စီးပွါးရေး က မျက်နှာမငယ်။
အနေ အစား ချောင်လည်။
ကျွန်တော် တို့ ခေတ်။
နအဖလက်ထက်၊ ဆိုက်ကားသမား အဖြစ်
ပညာမဲ့ တဲ့ နင်းပြား၊
ခလေး က နှစ်ယောက်
မိန်းမ သေပျောက် တဲ့ မုဆိုးဖို..
စီးပွါးရေး က ကျပ်။
အသက်ရှု က ရပ်မတတ်.
တိုးတိုးလာ တဲ့ စည်ပင်ကြေး။
ပေါင်နှံစရာ လည်း ဘာတခု မရှိ။
ဒီလောက် စုတ်တဲ့ ဘဝ။
တွန်းထွက်ရန် က မမြင်။
ပြည်တန်ဆာတော့ အဖြစ် မခံနိုင်။
ကြီးလာ မဲ့ သား
နွံ ထဲ နစ်မလား။
ကဲ လာ၊..သားနဲ့ သမီး..
အဖေ့ ကို ဘွေ ယူမှာလား။
ငိုမစဲတဲ့ ဘဝတွေ။ အငိုတိတ်အောင်
အဖေ ဒီလမ်း ရွေးချယ်။
ပိုးသတ် တဲ့ ဆေးအဆိပ်..
အစာ နဲ့ ရောကြွေးခဲ့တယ်။
ဆန့် ငင်ငင်၊ တွန့်ကောက်ကွေး ခန္ဓာကိုယ်များ.
အန်ထွက်လာ တဲ့ အန်ဖတ်များ၊
" အမလေး ပူလှချည်လားအဖေရယ်။
သားတို့ သမီးတို့ ဘာများဖြစ်တယ်။"
ဒို့ အားလုံး ကံဆိုး ဘဝ..
နအဖ ရဲ့ သမိုင်းတစ်ခုသာဘဲလေ။
အမှောင်ထဲမှာ မွေး...အမှောင်ထဲမှာဘဲ သေ။
မသဒ္ဓါ ( ရ။၄။ ၂၀၀၈)
စစ်တွေမြို့မှ စားဝတ်နေရေး အကြပ်အတည်းကြောင့် အဆိပ်စားသေကြောင်း ကြံစည်သွားကြသော မိသားစု ၃ ဦး အတွက် ။ ကောင်းရာ သုဂတိ လားနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:46 AM0comments Links to this post
မြက်မစားလိုသော ကေသရာဇာခြင်္သေ့။ ပညာတတ်များ ဗိုက်ဆာသေ...